Ọgwụ COVID kachasị mma n'ụwa dị maka ndị njem nlegharị anya US na mba ofesi na Hawaii
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọgwụ COVID kachasị mma n'ụwa dị maka ndị njem nlegharị anya US na mba ofesi na Hawaii
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ogologo ego ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ
Ndị ọbịa na Hawaii na -akwụ ụtụ $ 15.00 + na ndụmọdụ maka Mai Tai. Agbanyeghị, ọgwụ mgbochi COVID bụ n'efu, a naghị anabata ndụmọdụ ọ bụla.
Ndị njem nlegharị anya na -enweta ọgwụ mgbochi na Hawaii na -anatakwu ego ịzụ ahịa na inye onyinye yana ịgba ọgwụ mgbochi ahụ.
Ihe a niile bụ n'ikike nke ndị na -atụ ụtụ steeti Hawaii na Hawaii. Ọ na -eduhie ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID.
Ime ka ọha mmadụ nọrọ jụụ na ọnụọgụ ụgha nwere ike tinye aka na mmetụta na -ezighi ezi nke nchekwa yana mmụba nke ọrịa na ọnwụ.
Hawaii dị ka ọtụtụ steeti US enweghị ike ime ka ndị niile bi na ya nweta ọgwụ mgbochi na COVID-19. Ugbu a, ha na -eji nwayọ enye ndị ọbịa ọgwụ mgbochi, enwere ihe gbara ọchịchịrị.
Ndị na-atụ ụtụ isi na Hawaii na-akpọ ndị ọbịa mba ofesi bara ọgaranya ka ha nweta nkwado ọgwụ mgbochi COVID-19.
Gọvanọ Hawaii Ige nwere na -agba ndị ọbịa ume ka ha nọrọ n'ụlọ. Gịnị kpatara na o kwughị ndị ọbịa njem nlegharị anya ọgwụ mgbochi?
Naanị ọnwa ole na ole gara aga, Hawaii dekọtara ọrịa ọhụrụ 20-30 kwa ụbọchị. Ugbu a ndị njem na-ejupụta na steeti, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1,000 ọrịa COVID-19 na ndekọ ndekọ ọnwụ na-eme njem nlegharị anya.
Ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, na ụlọ nri jupụtara na mmadụ. Ebe nkiri na -akwụ ụgwọ ntinye ugboro atọ n'ọnọdụ ụfọdụ ma na -arụsi ọrụ ike. Enweghị ohere ịtọgbọ akwa nhicha n'akụkụ osimiri Waikiki, mana mkpọchi ọhụrụ na -adịwanye njọ, agbanyeghị na Lt. Gov. Josh Green kwuru.
Gọvanọ Ige n'oge na -adịbeghị anya rịọrọ ndị ọbịa ka ha tụleghachi njem ha na njem Aloha Steeti.
N'otu oge ahụ, Ụlọ ahịa ọgwụ na Hawaii mee mgbasa ozi na mgbasa ozi mpaghara yana na weebụsaịtị ka ndị mmadụ wee gbaa ọgwụ mgbochi. Ịhapụ ọgwụ mgbochi efu bụ nnukwu azụmahịa maka ha yana ụgwọ ụlọ ahịa ọgwụ. Iji mee ka ndị mmadụ nweta ọgwụ mgbochi ọrịa n'efu, ọtụtụ ụlọ ahịa na -enye ego mgbazinye ego dị ọnụ ala ka ha wee banye ngwa ahịa n'ụlọ ahịa ha. Na Hawaii, nke a gụnyere ndị ọbịa.
Enwere ọtụtụ ọgwụ mgbochi ọgwụ na United States. Steeti na -atụkwasị obi na njem njem na njem nlegharị anya dịka Hawaii na -emepụta ihe ka ha wee dị mma na ọnụ ọgụgụ ọgwụ mgbochi ọrịa. Ọ dị ka nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara steeti Hawaii na -enye ndị njem nlegharị anya.
Site na ọtụtụ ụgbọ elu mba ofesi na -akwụsịghị akwụsị site na Eshia gaa Hawaii eweghachiri ya, ụgbọ elu Hawaiian, Japan Airlines na ANA na -akpọga ndị njem gaa n'ụsọ osimiri aja aja ọcha. Aloha Steeti.
Ịga Hawaii maka ndị Japan anaghị achụ àjà. N'agbanyeghị ebe mba ụwa siri malite, ndị njem niile na -abanye Japan ka nọ n'okpuru iwu Mwepụ onwe onye were ụbọchị 14 mgbe ọ bịarutere amachibidoro iji ụgbọ njem ọha gụnyere ụgbọ elu ụlọ, tagzi, na ụgbọ okporo ígwè. Onye ọ bụla si Hawaii na -alọta ga -anọpụ iche na Japan. Kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị Japan ka na -eme njem n'ụsọ osimiri Hawaii?
Ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ọtụtụ mba gụnyere East Asia dị ala. Pfizer na Moderna bụ ọgwụ mgbochi COVID-19 kachasị dị irè ma na-achọkarị. Ọgwụ abụọ a anaghị adị na mba ụfọdụ. Citizensmụ amaala nọ na mba ndị ọzọ na -adịkarị njikere itinye ego nchekwa ndụ ha iji nweta ọgwụ mgbochi.
Onye nọọsụ nọ n'ụlọ ọgwụ ogologo oge ọgwụ ike na Waịkiki, onye na -achọghị ka akpọpụta ya, gwara ya eTurboNews:
"Anyị na -enweta ọtụtụ ndị njem na Longs Drugs na -arịọ anyị ka anyị gbaa ọgwụ mgbochi."
Ebee ka ndị njem nleta ọgwụ mgbochi gị si?
“Ọtụtụ ndị Japan, kamakwa ndị Korea, na ọbụna ndị ọbịa Europe na -arịọ ka e nye ha ọgwụ mgbochi. Anyị nwere ndị ọrụ na-asụ Japanese ga-enyere aka. Anyị na -enwetakwa ndị ọbịa ụlọ na -arịọ ka e nye anyị ọgwụ mgbochi. ”
Ị nwere ohere inye onye ọ bụla na -arịọ maka ya ọgwụ mgbochi ahụ?
“Ee, anyị anaghị akpa oke. Anyị na -arịọ maka agbụrụ maka ebumnuche mgbakọ na mwepụ, mana anyị anaghị arịọ maka ịbụ nwa amaala, ọnọdụ obibi, wdg. ”
Ego ole ka ọgwụ Longs ga-akwụ maka ọgwụ mgbochi ahụ ga-enye ndị ọbịa si mba ọzọ ma ọ bụ ndị njem si na steeti?
“Anyị anaghị ana ya ego. Anyị na -agbakwụnye n'ezie mbelata azụmaahịa ma ọ bụ ihe mkpali nye onye ọ bụla na -agba ọgwụ mgbochi. ”
Kedu onye na -akwụ ụgwọ maka ọgwụ mgbochi ahụ?
"Steeti Hawaii na -akwụ anyị ụgwọ maka ọgwụ mgbochi."
Kedu ụdị ọgwụ mgbochi ị na -enye ndị ọbịa?
"Anyị na -enye ọgwụ kacha mma dị n'ụwa: COVID Pfizer ma ọ bụ ọgwụ Moderna."
Kedụ ka steeti ga-esi mara mmadụ ole na-abụghị ndị bi na-enweta ọgwụ mgbochi ahụ?
“Steeti anaghị ajụ ebe ndị ahịa anyị si. Anyị na -edekọ nọmba ID, dị ka paspọtụ, nọmba ikike ịnya ụgbọ ala. Site na nke a, anyị na -akwụ steeti ụgwọ. ”
Nke a ọ gaghị emetụta ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi na -akọ na steeti Hawaii na -edo onwe ya n'okpuru CDC?
“Echere m na steeti agaghị ama onye n'ime ndị a gbara ọgwụ mgbochi bụ ndị bi na ndị ọbịa. Naanị ihe anyị na-arịọ onye ọrịa bụ ka ọ gbaa nke abụọ ka izu 3-4 gachara. Echere m na nke a bụ ezigbo azụmahịa maka ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, na akụ na ụba anyị. ”
Dabere na nke a, ịgba ọgwụ mgbochi mbụ nke 71% na Hawaii, yana ihe karịrị 51% ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi na steeti nwere ike bụrụ ihe na -ezighi ezi.
Naanị mba ụwa, ihe karịrị ndị ọbịa 1,000 na-abata na Hawaii n'ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị kwa ụbọchị. Ọtụtụ ndị ọbịa mba ofesi na -abata na njikọ ụgbọ elu site na ala US.
N'ime ụlọ, Hawaii nwere ihe karịrị mmadụ 20,000 na -abata kwa ụbọchị kwa ụbọchị kemgbe enwere ọgwụ mgbochi ahụ n'enweghị oge ọ bụla.
Nke a na -emepe ọtụtụ ajụjụ.
N'iwepụta nọmba ịgba ọgwụ mgbochi na -ezighi ezi, ndị mmadụ nọ na Hawaii nwere nsogbu karịa ka ha tụrụ anya na ha ga -adị?
Nke a ọ ga -akọwa ihe kpatara ọrịa na ọnwụ nke Hawaii na -edekọ ndekọ ọhụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị?
Kedu ihe kpatara ndị na -atụ ụtụ Hawaii ga -eji nye ọgwụ mgbochi? Ndị njem anaghị abụ ndị na -enweghị ebe obibi ma ọ bụ ndị ogbenye. Ọ bụrụ na ebe ezumike ma ọ bụ ụgbọ elu chọrọ inye aka kwụọ ụgwọ ya - ọ dị mma. Site na ọnụ ọgụgụ ndekọ nke ndị na -enweghị ebe obibi na ọtụtụ ndị bi na nsọtụ na Hawaii, steeti chọrọ ego ha ga -eji lebara nnukwu nsogbu mmekọrịta ọha na eze anya.
Ọtụtụ mba n'ụwa na -enwe ntiwapụ COVID na ọnwụ. Ha chọrọ ọgwụ mgbochi ngwa ngwa. Ụmụ amaala ha enweghị ike ị nweta ezumike Hawaii.
Kama inye ndị njem nlegharị anya ọgwụ mgbochi ahụ, gịnị kpatara na Hawaii agaghị enweta ego sitere na ogwu ahụ wee ziga ya na mba ndị nọ na mkpa?
Onweghị ihe dị njọ na njem njem ọgwụ mgbochi ọrịa. San Marino, Israel, na ọtụtụ mba ndị ọzọ nwere ụlọ ọrụ na -eme njem nlegharị anya nke ọgwụ mgbochi. Ihe iseokwu a bụ imebi ọnụ ọgụgụ na itinye ndị bi n'ihe egwu site na ịnye eziokwu na -ezighi ezi, nke na -abụghị naanị ihe ọjọọ, mana ikekwe onye omekome.
Ihe Hawaii na -eme n'ọnụ ọgụgụ buru ibu yana yana oke nzuzo - a na -akwalite ma na -akpọsa ihe omume ndị a na Guam site na Kọmitii njem nlegharị anya nke Guam.
Njem nlegharị anya Uganda ugbu a na-ezubere ndị isi oche na mkpali ụlọ…
US VP Kamala Harris na NASA na ọrụ ihu igwe ngwa ngwa
Njem nlegharị anya agbamakwụkwọ: Na-ekuba ndụ ọhụrụ n'ime njem na...
US NAVY: Mmiri ị drinkụ mmanya na Hawaii ka ọ bụrụ nsị…
Ọdịmma ma ọ bụ mara mma? Kedu ndepụta nke ndị na-ere ahịa ga-adaba ugbu a?
Uganda na-akwado 4th African Birding Expo – Nnukwu...
Akwụkwọ ozi ọhụrụ UNWTO degaara ndị otu ya:...
Eziokwu na-adọrọ mmasị, na-atọ ụtọ gbasara Caribbean
Ndị ọrụ Kaiser ga-eme ihe echi n'elekere asaa nke ụtụtụ:...
Ndị isi ụlọ ọrụ njem na-agba mbọ na...
Mmanya - Chenin Blanc ịdọ aka ná ntị: Site na Yummy ruo Yucky
Ryanair na-ekwupụta usoro ihe omume kachasị na Jordan nke a…
22 EE, 250 Mba: Zurab Pololikashvili maka UNWTO...
Dr. Taleb Rifai oku ngwa ngwa na mba ndị otu UNWTO...
42% nke ndị Britain ga-atụle ịga ezumike na Saudi ...
Delhi na-aga n'ihu mbelata ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5-Star
WTM London mepere emepe: Ntọhapụ ka ọ bụ egwu?
Ndị isi mba Afrịka nke ihe ọchị na-agbago maka obodo...